FAAHFAAHIN: Maxay ka wada hadleen Madaxda ugu sareysa dawladda Puntland oo yeeshay kulan saacado dheer qaatay, loogana hadlay Arrimo xasaasi ah? – Puntlandtimes
FAAHFAAHIN: Maxay ka wada hadleen Madaxda ugu sareysa dawladda Puntland oo yeeshay kulan saacado dheer qaatay, loogana hadlay Arrimo xasaasi ah?
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in kulan saacado dheer qaatay uu dhexmaray Madaxweynaha, Madaxweyne kuxigeenka, Guddoonka baarlamaanka dawladda Puntland, kaas oo ka dhacay Aqalka Madaxtooyada subaxnimadii Axadda 10 June 2018, waxaana aad looga hadlay Ammaanka, Siyaasadda iyo arrimo kale oo aysan ilaa hadda ogaanin Puntland.
Xogaha laga helayo kulankan ayaa ah mid gaabis ah oo aysan cidna wax badan ka ogaan Karin, maadaama xogheymaha Madaxdan xataa aysan qeyb ka aheyn shirarkii u dambeeey, haddana wararka ayaa sheegaya in laga wada hadlay arrimaha la xariira howlgalka Xoreynta gobalka Sool oo ay horey ugu dhawaaqday dawladda Puntland.
Puntlandtimes.com waxay ogaatay in mudadii uu socday kulanka lagu dhameeyey kala aragti duwanaansho u dhaxeeyey Madaxweynaha & Madaxweyne kuxigeenka Puntland, kaas oo ku aadanaa arrimaha siyaasadda ee dalka, waxaana muuqata in lasoo afjaro maalmo arrimahaasi ay taagnaayeen.
In dalka laga difaaco cadowyada kusoo duulay ayaa kamid ahayd arrimaha aadka looga hadlay, waxaana Madaxdu ay isku raaceen sida ay lama huraan ka u tahay in laga dhabeeyo balantii dawladdu qaaday, oo ahayd in la xoreeyo magaalada Laascaanood iyo dhulka maqan.
In loo diyaar garoobo dagaalka oo noqon kara mid daba-dheeraada ayaa kamid ahayd arrimaha laga wada hadlay, waxaana muuqata in dhamaan waxyaabihii laga wada hadlay dhinacyadu ku guuleysteen oo ay isku raaceen, inkastoo horeyba qodobada la xariira difaaca dalka aan muran ka taagneyn.